New Samsung Tab S7 FE na Tab A7 lite na-abịa.
Site na akụkọ a na-akọ, ihe ọhụrụ Samsung galaxy tab S7 FE na Galaxy tab A7 Lite na-abịa na June 2021. Galaxy Tab S7 FE bụ maka inye ndị ahịa atụmatụ ha hụrụ n'anya na ọnụ ọnụ ọnụ. Ewubere ya na ihe ngosi 12.4 nke buru ibu, zuru oke maka inweta ntaneti, imeputa ihe, mu ...
Samsung Tab S7 tinyere VS iPad Pro 2020
Ebe ọ bụ na ipad pro na-doro anya na-ahuta nke kacha mma mbadamba kpam kpam. Ugbu a Samsung mere Tab S7 gbakwunyere iji mee ka mbadamba gam akporo kacha mma kachasị mma na mbụ. Ka anyị jiri ha tụnyere atụmatụ. Nke mbu, Tab S7 gbakwunyere na-abia chaja ngwa ngwa. O nwere nkwado nke iri anọ f ...
Kedu ihe dị iche na keyboard Bluetooth na keyboard wireless?
1. Ihe dị iche 1: connectionzọ njikọ dị iche iche. Bluetooth keyboard: nnyefe ikuku site na protocol Bluetooth, nkwukọrịta Bluetooth n'ime oke dị (n'ime 10m). Ikuku keyboard: Nyefee ozi ntinye na onye nnata pụrụ iche site na ikuku infrared ma ọ bụ redio. 2. Ndiiche ...
Kedu folio dị mma maka iPad gị pro 11 12.9 inch 2021?
site ha na 21-05-15
2021 ipad pro 11 na 12.9 inch dị maka ịzụta na ọkara nke ọnwa Mee. The Apple kwuru, sị: The kacha iPad ahụmahụ. Ugbu a site na M1 kpamkpam, ngosipụta XDR na-adọrọ adọrọ, yana ikuku 5G na-enwusi ọkụ. Kwere na a kpaliri gị inweta ya. Youkwadoro ihe niile maka ipad p ...
Okwu ikpe ohuru maka AKW noKWỌ nova 3 agba ereader Ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịgụ ebook na onye na-agụ ya. Ọ dị mma ịgụ ọtụtụ akwụkwọ na agụ ahụ ebughibu. Enweghị nchekasị iburu akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị arọ, nke na-ewe ohere na ego. Ugbu a, BOOX ereader bụ otu n'ime ndị na-agụkarị ọkacha mmasị. M ...
Ihe ngosi ohuru ohuru maka Samsung galaxy tab A7 Lite 8.7 inch
Site na ozi ala ọzọ ekpughere, Samsung galaxy tab A7 Lite 8.7 inch ga-ahapụ n'oge na-adịbeghị anya. Nọmba nlereanya SM-T225 SM-T220. Ọ bụ 8.7 nke anụ ọhịa ahụ nwere igwe dị egwu. Na njikọ USB-C. Nha ahụ kachasị mma, ma dị mma iji rụọ ọrụ otu aka. Ugbu a ebughibu na fechaa echebe c ...
Nhọrọ kacha mma maka ipad gị
Nhọrọ kachasị mma maka ipad gị Mgbe ị nwetara mpe mpe akwa ọhụrụ, ịkwesịrị ịkwadebe ụfọdụ ngwa ga-adị mkpa. Ihe kachasị mkpa bụ ihe nchekwa. IPad gị dị oke ọnụ nke na ị ga - echekwa ya dị ka mmanụ a honeyụ .Ọ ga - eso gị nọrọ ehihie na abalị. Ya mere, anyị kwesịrị ilekọta ma chebe ya ma ọ bụ ...
Mbadamba ụrọ ga-ebili n'ọdịnihu
Ahịa mbadamba nkume ọ ga-eto na afọ ọhụrụ a? Kemgbe ntiwapụ nke afọ a, ma ụlọ ọrụ mkpanaka ma nkuzi ụmụ akwụkwọ na-ewu ewu n'ịntanetị. Ejila nwayọọ nwayọọ mebie ókè mmụta nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, yana gburugburu ebe ọrụ anaghị ejedebe na ọfịs, ụlọ, cof ...
Ihe ohuru ohuru jikọtara aka na mpe mpe akwa keyboard TPU Case Naa, anyi weputara ihe omuma ohuru ohuru nke anyi -Magnetic TPU kiiboodu maka ipad ikuku 4th Generation 10.9 inch 2020. IHE KWES CR YOU KWES RER L n'ezie. Ọ na-agwakọta nkenke trackpad na keyboard zuru oke maka iPad gị ...